टिम प्रिभ्युः विश्वकपमा ट्युनिसिया नयाँ इतिहास रच्ने दाउमा
ट्युनिसियाको अघिल्ला विश्वकपको इतिहास राम्रो छैन । तर, यो पटक युवा खेलाडीको बाहुल्यता ट्युनिसियामा रहेको छ । ट्युनिसियाको लक्ष्य क्वाटरफाइनलको यात्रा गर्नु रहेको छ ।
टिम प्रिभ्युः बेल्जियमको विश्वकप जित्ने सपना ? यो टिमले साकार पार्ला त ?
यसपटक बेल्जियमलाई पनि विश्वकप दाबेदारको रुपमा लिइएको छ । फुटबल विश्लेषकहरु बताउँछन् स्टाइकर, मिडफिल्डर्स तथा स्टाइकरहरु सबै फर्ममा रहेका छन् ।
आजको खेलमा यी तीन खेलाडी चम्किन सक्छन्
एजेन्सी । रसियामा जारी विश्वकप फुटबलमा आज पनि तीन खेल हुँदैछन् । आजको पहिलो खेलमा दक्षिण कोरिया र स्वीडेनबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
जमर्नीविरुद्ध लोजानोले गोल गरेपछि मेक्सीकोमा भूकम्प
काठमाडौं । डिफेन्डिङ च्याम्पियन जमर्नीवीरुद्ध मेक्सीकन खेलाडी आर्भिङ लोजानोले गोल गरेपछि मेक्सीकोमा भूकम्प आएको समाचार प्रकाशित भएको छ ।
ब्राजिल र स्विजरल्याण्डबीचको खेलको स्टार्टिङ लाइनअपमा को–को परे ?
काठमाडौं । ब्राजिल र स्विजरल्याण्डबीचको खेल अबको केही बेरमा सुरु हुँदैछ । रोस्तोभ रंगशालमा हुने खेलमा ब्राजिलले स्विजरल्याण्डविरुद्ध कडा टोली उतारेको छ ।
मेक्सीकोले डिफेन्डिङ च्याम्पियन जमर्नीलाई हरायो
काठमाडौं । मेक्सीकोले विश्वकपको डिफेन्डिङ च्याम्पियन जमर्नीलाई हराएको छ । केहीबेरअघि रसियाको लुज्निकी रंगशालमा सम्पन्न खेलमा जमर्नीलाई मेक्सीकोले १–० गोलले हराएको हो ।